Mooshin looga soo horjeedo go’aankii Nuur Cade ku kireeyey Safaaradii Somalia ee Italy oo barlamaanka la keeney. – idalenews.com
Mooshin looga soo horjeedo go’aankii Nuur Cade ku kireeyey Safaaradii Somalia ee Italy oo barlamaanka la keeney.
Fadhigii Maanta Barlamanka ay ku yeesheen magaalada Muqdisho oo uu shirgudoominayay Gudoomiyaha Baralamanka iyo ku xigeenkiisa 2-aad ayaa waxaa looga hadlay Kireynta Dhismaha Safaarada dowlada Somalia yak u leedahay dalka Taliyaaniga.
Doodan ayaa imaanaysa xilli dhowaan Nuur Cadde oo wareysi siiyay Idaacadaha Maxaliga ee Muqdisho uu cadeeyay in uu shirkada dhinaca dalxiiska qaabilsan oo laga leeyay dalka Taliyaaniga uu ka kireeyay,iyadoo arintaasina ay si weyn uga soo horjeesteen soamaalida ku nool wadanka Taliyaaniga kuwaasi oo ugu baaqay madaxda sare ee dowlada inay soo farageliyaan.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo safar ugu ambabaxey dalalka deriska
Shirkad British “Tullow Oil” oo baaris shidaal ka waday Kenya oo sheegtey in Ceelal Shidaal laga helay gudaha Kenya